Unokwenza njani ulusu lucoceke?
Kwinqaku lethu "Indlela yokwenza ulusu lucoceke" siya kukuxelela indlela yokunyamekela ngayo isikhumba. Ezi ngcebiso kunye neemveliso ziya kunceda ukugcina ubuso bakho besikhumba ngaphandle kwezibhokhwe kunye nococeko. Ezi ngcebiso zinika iziphumo eziphumelelayo.
Akukho mfuneko yokuthintela, lo ngumgaqo ophezulu kunye wokuqala. Ungathinti isikhumba, kuquka ukuchukumisa ngezandla ezingahlambulukanga. Ukuba uthinta ulusu lobuso bakho ngezandla zakho, oku kuya kukhokelela ekukrokratheni kwiminwe yakho, kwaye emva kwezandla zakho ukungcola kuya kudlula ngokukhawuleza kwesikhumba ebusweni. Ukuba unesinye i-pimple, ke kukho ithuba lokwenza izibhamu ezintlanu kuzo.
Elula indlela yokulungisa, ilungele ubuso
Xa usebenzisa izidakamizwa ezinobundlobongela, kunokubangela ubomvu besikhumba, kubangele ukuba idibanise kwaye yome. Ukuba ucinga ukuba ukuba usebenzisa i-benzene peroxide ye-10% yonke imini, kuya kunceda ebusweni, kodwa ukuba ubuso bakho bunomsindo ngexesha elifanayo, kunokukwenza ukuba ukucaphukisa kube ngakumbi.
Geza ubuso bakho ngaphambi kokulala
Kufuneka yenziwe ngamaxesha onke kwaye akukho zizathu eziye zafakwa kwi-akhawunti. Emva kwakho konke, ngelilanga ubuso bakho buthatha kwizinto ezininzi zobuthi kunye nosila. Kwaye xa konke oku kudibaniswa kunye neziqhumiso, izibhobho zenziwa ngale ndlela kwaye izibonda zobuso zixutywa. Into ebalulekileyo yinto omele uyenze ukuze uhlambuluke isikhumba sakho sobuso, kufuneka uhlambe ekupheleni kosuku. Ukuba ukhathele kakhulu, yenza njalo xa ubuya ekhaya ngaphambi kokuba ulale.
Sebenzisa ikhambi nge-salicylic acid
I-salicylic acid iyanciphisa umveliso we-sebum, ibulala ibhaktheriya kunye nokulwa neempumpi. Ukuba uziva unomsindo kwaye unomile, kufuneka usebenzise i-detergent yakho ngokuhlwa, kwaye kusasa sebenzisa i-detergent. Ukususa impepho kufuneka uhlambe ubuso bakho ngokuhlwa kabini.
Ukuhlaziya ubuso bakho
Mhlawumbi uvile ukuhlambulula ubuso bakho, amanzi okusela uya kukunceda, kwaye kunjalo. Ukuba usela amanzi amaninzi, unokuhlambulula umzimba wakho wee-toxins, kodwa kwakhona yongeza umswakama obalulekileyo kwesikhumba sakho.
Kanye kunye namanzi okusela kufuneka usebenzise i-moisturizer. Ukuba unesikhumba somnxeba, ukhilimu ophuculisayo uyakunceda ukulinganisa inani le-sebum, konke oku kuya kubangela i-acne encinane, ulusu luya kuncipha. Musa ukucinga ukuba xa usebenzisa isicelo sokunyusa amanzi, uya kwandisa inani le-acne. Ukuba usebenzisa i-moisturizer enamafutha aphantsi, kuya kuba nobumbe obuncitshisiweyo, ukucaphuka kunye ne-acne encinci.
Ukunakekelwa kweConcer Recipes
Ukunyamekela ulusu lobuso, kufuneka ukwazi ukuba luhlobo luni lesikhumba sakho. Ukwenza oku, hlala phambi kwesibuko uze uhlolisise isikhumba sobuso. Ikhumba eliqhelekileyo li-matte, elincinki elincinci, elihlaziyekileyo kwaye licocekile. Eli hlobo lukhuni, kwaye lufuna ukutya okunomsoco, ukunyanzela nokucoca. Ukucoca ulusu olufunekayo ukuba uthathe ukucoca i-emulsions okanye i-foam, isepha epholileyo kunye namanzi ashushu.
Thatha amathisipuni ama-4 ebisi kunye nee-3 teaspoon zomhlaba oatmeal, mix and apply to the skin this mix, emva kwemizuzu elishumi elinesihlanu kufuneka uhlambe.
Senza ukumnika okuvela kulolu hlobo, uthathe isipuni sesinambuzane ezahlukeneyo: i-rosemary, i-sage, i-mint, i-cornflowers, i-marigolds, i-lavender, i-chamomile eyomileyo, le mijelo iya kugcwaliswa ngeglasi ye-vodka, mayeke ihlasele iintsuku ezingama-20 ukuya kwi-30. Sigubungela ubuso ngobusuku bonke nge-infusion. Emva koko sukuma ngamanzi abandayo uze usule i-cube ye-ice.
Kulo masksi, thabatha i-yolki yeqanda, isipuni sefulawa, iipunipoli ezimbini zobisi, udibanise yonke into uze uyibeke ebusweni bakho, ubambelele emaminithini anesihlanu, uze uhlambe ngamanzi afudumele. Emva kweemaski, siya kusebenzisa ukhilimu onondla ebusweni.
Ikhumba elomileyo - alibonakalisi i-pores, elincinci nelithambileyo, elijongene nokubonakala kwangoko kwemibhobho kunye nokucubungula. Xa ulusu olomileyo alufuneki ukusebenzisa isepha, kodwa ukuba lunako ukunyamezela isepha kwaye alufaki, kwaye aludibanisi, ulusu lwam emva kwezinsuku ezi-2 okanye iintsuku ezi-3 ngamanzi apholileyo okanye amanzi afudumele kunye nesepha. Ukunciphisa amanzi, i-15 grams yesepha egruthiwe idibeneyo kwiiglasi ezi-2 zamanzi ashushu, kwaye ungeze i-10 litres zamanzi. Yenza umxube uze ushiye ubusuku. Emva koko, manzi ngaphandle kwetyuwa uze ungeze iipuni ezintathu ze-boric acid emanzini.
Ungathatha isepha, umgubo wengqolowa okanye ibhanki yengqolowa. Thatha isipuni se-bran okanye ufulawa uhlanjululwe kwisimo sama-mushy ngamanzi afudumele. Ubuso kufuneka buhlanjwe ngaphambili kwaye kusetyenziswe imizuzu eyi-10 okanye imizuzu eyi-15, size sihlambe kwaye sisebenzise ioli yezolimo kwiyure enye ebusweni. Musa ukulibala ukubeka ioli kwikhusi leentloko. Ioli egqithisileyo igxinwe nge-napkin, iinkophelo azifumaneki.
Umaski wesikhumba esomileyo - thabatha i-yolk egciniweyo, i-teaspoon ye-ukhilimu, iqanda elibethiwe kwaye ugxininise ukubunjwa kwaye ulibeke ebusweni bakho.
Ikhumba elinamafutha linqabileyo , liluhlaza kwaye lukhulu. Ukwandisa ukukhutshwa kwamanqatha kukunika ukukhanya okukhulu, kwaye ngenxa yokuba isikhumba esinamafutha sikhulisile i-pores, sifana ne-orange peel. Ngokuqhelekileyo amachashaza amnyama namhlophe afana ne-acne inflammatory. Isikhumba sam ubusuku kunye nesepha namanzi. Emva kokuhlamba, hlambulula ubuso bakho ngamanzi apholileyo kwaye usebenzise ukhilimu. Emva kweeyure ezimbini, sisusa i-cream nge-napkin.
Ngentsasa, sisusa ubuso kunye nobunjalo obunjalo: thabatha i-300 ml yamanzi abandayo, kongeza amaconsi ama-10 e-lemon okanye i-teaspoon yeviniga.
I-mask efanelekileyo yesikhumba somnxeba ngumxube: siya kuthatha iprotheni kunye nepaspoon yelisi lemon.
Kwakhona wenze i-mask kwi-half-spoonful yeaven and one teaspoon yobisi.
Ngaphambi kokuba senze i-mask, siya kwenza ibhegi yokuhambisa.
Ngesikhumba esomileyo, uhlambe umzuzu we-5 ukuya kwe-10, kanye emva kweenyanga ezimbini okanye ezintathu.
Ngesikhumba somnxeba, susa ibini le-15 imizuzu kabini ngenyanga.
Ubhavu lwe-Steam ithatyathelwa yinkomfa efudumeleyo. Ukunyanzelisa ubuso, kwaye ubambe de ide ipholile. Njenge-compress sisebenzisa i-decoction yombala wombala, i-lavender, i-chamomile.
Ukucoca zonke iintlobo zesikhumba, thatha iipuni ezimbini zeeyile ezifudumele. Okokuqala, thatha, ugubungele ubuso ngeoli yepotton yeoli, uze usebenzise inani elikhulu leoli ebusweni bakho kwaye emva kwemizuzu engama-3, susa uboya bekotoni obunamanzi anosawoti okanye itiye. Ngamanzi anosawoti, thatha ihafu yesitha yamanzi abilisiwe uze ungeze isipuni sesityuwa. Esi sixhobo sinokusetyenziswa ebusika nakusentwasahlobo.
Unokuhlambulula ilusu ngamanzi angasese, amanzi enqabileyo, esiwenzayo ngale ndlela: thabatha i-gram 20 ye-chamomile, 100 ml ye-20% yotywala kwaye unyanzele iintsuku ezisixhenxe. La manzi aneempembelelo ezichasayo kunye nokucoca ulusu kakuhle.
Isisombululo se Tonic, esifanelekileyo nasiphi na isikhumba, siya kuthi: thatha ingilazi yamanzi afudumele abilisiwe, uchithe kuyo i-spoonful yobusi kunye nejusi yesiqingatha semon, epholile. Ngaphambi kokusebenzisa ukhilimu, sebenzisa ngokuhlwa.
Ngoku siyazi indlela yokwenza ulusu lobuso lucoceke. Zonke ezi zokupheka ezilula ziza kunceda ukulahla iimpumphu kwesikhumba kwaye wenze ulusu lube luhamba kakuhle kwaye lucoceke.
Ukwelashwa kwamehlo asebusika: Ubuncwane obuthathakayo kwesikhumba esomileyo, esikhulayo ekhaya
Ukuvuselela ubuso kwakhona
Iviniga ye-Apple ephuma kwi-acne
Ukunyamekwa kwamehlo, iMasks eye
Izifo zeMask Care Care Mask
Ukunyamekela ngononophelo lwebusika
Ukuphononongwa kwe-Movie Hlangana: Dave
I-Orange yambamba nge-glaze
U-Ksenia Sobchak ufumene ubungqina bokungcolisa uSvetlana Zhurova
I-Casserole esuka kwi-cottage shiese kwi-oven microwave
Ukutya koProfesa Usama Hamdiy
Abantwana-bully: iingcebiso zeengqondo zeengqondo kwisisombululo seengxaki
Ukutya okumnandi ekhaya
U-Stas Kostyushkin wahleka kwi-fan, ividiyo
Luhlobo luni lwebhokisi lokukhetha umntwana?